Ithegi: igunya | Martech Zone
NgoLwesine, Agasti 24, 2017 Lwesine, Matshi 25, 2021 Douglas Karr
Njengengxenye yesicwangciso sokukhangela ngokubanzi, sasidla ngokuba neenkampani zijolise kumxholo wamva nje, rhoqo, kwaye ochaphazelekayo oqhutywa ngamagama aphambili anokunyusa umgangatho we-organic kunye noguquko. Ukubhala amanqaku amafutshane amaninzi yenye yeengcebiso esizishiye kule minyaka idlulileyo. Kukho izizathu ezimbalwa zokuba kutheni: umxholo onzulu-iinjini zokukhangela zibekwa ngokuthandwa ngumxholo, ixesha. Ukuthandwa kusekwe kumgangatho, kwaye ke ayisiyiyo
Kwiminyaka elishumi yokunceda iinkampani ukuba zikhule kumashishini abo kwi-intanethi, siqinise iinkqubo eziqinisekisa impumelelo. Rhoqo kunoko, sifumanisa ukuba iinkampani ziyasokola kwintengiso yazo yedijithali kuba zizama ukutsiba ngokuthe ngqo ekusebenzeni kunokuba zithathe amanyathelo afanelekileyo. Utshintsho kuDijithali lweNtengiso Inguqu kwintengiso iyafana nenguqulelo yedijithali. Kwisifundo seDatha esivela kwi-PointSource -Ukufezekisa inguqu kwidijithali- idatha eqokelelwe kubathathi-zigqibo abangama-300 kwiNtengiso, kwi-IT nakwiindawo zokuSebenza